A Full Guide nyefee Music si iTunes ka Android ntị na mbadamba
Mgbe na a ohuru gam akporo ngwaọrụ, chọpụta na gị songs, listi ọkpụkpọ, zụrụ fim, wdg na-araparawo iTunes Library? Kedu ụdị ihe nwute bụ nke a! Apple adịghị enye ọ bụla ngwọta nyefee music si iTunes ka Android, otú Google dị ka mma. Mere anyị ọrụ na-ata ahụhụ site na oké Ọwara n'etiti abụọ nyiwe? N'ezie, ị na-adịghị na mgbe gị mara ole na ole Atụmatụ na usoro maka otú nyefee songs, videos, iTunes U, Pọdkastị, na ndị ọzọ si iTunes ka Android. N'okpuru ebe a bụ 3 mfe ụzọ ị pụrụ isi tinye nyefee iTunes ka Android. Ego: a bụ otu ihe mfe na mma-ngwọta nyefee ọ bụla data n'etiti ọ bụla ntị, gụnyere music. Lee nkọwa.
Ngwọta 1. Iji aka Nyefee Music si iTunes ka Android Devices
Ngwọta 2. Nyefee iTunes Media faịlụ ka Android Devices na 1 Pịa
Ngwọta 3. Top 4 Android égwu Ka idetuo iTunes Media na Android Devices
Cheta na: 3 ụzọ niile dị nyefee songs, listi ọkpụkpọ, fim, iTunes U, Pọdkastị, na ndị ọzọ si iTunes ka Android igwe na mbadamba. Otú ọ dị, na-eme ka ọ dịrị ya mfe ị na-amụta otú e si eme ọrụ, N'okpuru ebe m ga-otú nyefee music si iTunes ka Android ngwaọrụ dị ka ihe atụ iji gosi nzọụkwụ.
Ọ bụrụ na ị familar na iTunes Library, mgbe ahụ, ị ​​ga-amarakwa na unu pụrụ ndokwa iTunes media na nchekwa ma-azọpụta niile faịlụ ka iTunes media nchekwa. Nke a bụ atụmatụ ị kwesịrị ị na-eji nke. Ozugbo i nwere otu songs depụtaghachiri ka nchekwa, mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ijikwa na-esi gị iTunes Music jidesie Android hassle kpam kpam. N'okpuru ebe a bụ nzọụkwụ maka otú ka ojiji nke iTunes media nchekwa nyefee music si iTunes ka Android ngwaọrụ.
Nzọụkwụ 1. Copy faịlụ ka ndabere iTunes media nchekwa
Na iTunes, na-aga Dezie> Reference ...> Advanced na ego nhọrọ Copy faịlụ ka iTunes media nchekwa mgbe na-agbakwụnye na ọbá akwụkwọ. Site n'ime nke a, music, video na ndị ọzọ na mgbasa ozi faịlụ ga-echekwara akpaghị aka na media nchekwa. N'ihi ya, ị ga-esi na-alụbeghị di faịlụ mkpa ka ị idetuo gị Android igwe ma ọ bụ mbadamba. N'okpuru ebe a bụ ndabere iTunes media nchekwa ọnọdụ:
Windows 7: C: \_ Ọrụ \_ aha njirimara \_ My Music \_ iTunes \_
Windows 8: C: \_ Ọrụ \_ aha njirimara \_ My Music \_ iTunes \_
Nzọụkwụ 2. Nyefee music si iTunes ka gam akporo igwe / mbadamba
Chọta ọnọdụ nke iTunes media nchekwa nke m na kwuru n'elu. Ugwu gị Android ekwentị dị ka ihe mpụga ike mbanye site eriri USB. Mgbe ahụ, pịa imeghe My Computer ma ọ bụ kọmputa na-emeghe gị Android ngwaọrụ SD kaadị. Mepee iTunes media nchekwa idetuo na n'oge gara aga songs gị Android ngwaọrụ.
Cheta na: Mac apụghị ịchọpụta gị Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba ka Windows PC na-eme. Iji nyefee iTunes ka Android on Mac, ị ga-atụgharị ụfọdụ-atọ ndị ọzọ ngwá ọrụ maka enyemaka. Wondershare TunesGo maka Android nke m kwuru n'elu bụ ihe dị otú ụdị ngwá ọrụ, ị nwere ike agbalị ya. Ọ bụrụ na ị maghị ebe na-atụgharị aka, m chere na i kwesịrị kpọmkwem na-agbalị ngwọta 2.
* Uru na ụkọ ihe ụfọdụ nke Ngwọta 1
Uru: otú a bụ kpam kpam n'efu na i nwere ike ime ya niile site onwe gị enweghị ihe ọ bụla-atọ ndị ọzọ ngwá ọrụ maka enyemaka;
Ọghọm: 1st, otú a nwere ike adịghị nyefee iTunes listi ọkpụkpọ site na iTunes ka Android ngwaọrụ; 2nd, ma ọ bụrụ na ị nwere nnukwu iTunes n'ọbá akwụkwọ, mgbe ahụ, otú a ga-ogide ukwuu ohere nke kọmputa gị; 3rd, ọ na-ewe oge dị ukwuu idetuo songs otu-site-otu gị Android ngwaọrụ.
Ngwọta 2. Nyefee iTunes ka Android Devices na 1 Pịa
Iji nyefee songs, fim, Pọdkastị, iTunes U na ndị ọzọ si iTunes Library ka Android igwe ma ọ bụ mbadamba, na quickest ụzọ bụ iji iTunes ka Android Mac transfer software - Wondershare TunesGo, nke na-enyere gị nyefee music, playlist, pọdkastị, na iTunes U si iTunes ka Android ngwaọrụ na 1 Pịa. Ọzọkwa, ị pụrụ-nyefee music, fim na listi ọkpụkpọ site na Android ngwaọrụ azụ iTunes.
Na-eme ka gị na Music - Nyefee Music si iTunes ka Android Devices
Nzọụkwụ na Jiri Wondershare TunesGo nyefee Music si iTunes ka Android
Nzọụkwụ 1 Melite gị gam akporo ngwaọrụ
Wụnye na ẹkedori iTunes ka Android transfer software na gị Mac. Jikọọ gị android ekwentị ma ọ bụ mbadamba na gị Mac site eriri USB. Gbaa ndị software na ị ga-ahụ na ọ na-egosipụta na n'akụkụ aka nri nke iTunes.
Nzọụkwụ 2 Nyefee Music si iTunes ka Android
Ke akpan window, pịa mmekọrịta taabụ. Ị ga-esi nhọrọ abụọ. Otu bụ ka mmekọrịta Niile n'ọbá akwụkwọ, ndị ọzọ bụ họrọ listi ọkpụkpọ. Họrọ otu na pịa mmekọrịta ka mmekọrịta music, fim, pọdkastị, iTunes U, TV na-egosi na ndị ọzọ gị Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba.
Ọ bụrụ na ị na-adịghị amasị iji desktọọpụ software ma ọ bụ na-emefu oge dị ukwuu idetuo media faịlụ site na nza nke nchekwa aka gị Android ngwaọrụ, ị nwekwara ike gbalịa Android ngwa. Ndị a ngwa ọdịnala ka ị mmekọrịta iTunes ka Android-ejighi eriri. Ebe a, m depụta si n'elu 4 iTunes ka Android mmekọrịta ngwa.
1. AirSync: iTunes mmekọrịta & airplay Ugwo 3.9 / 5 Android 2.2 na elu
2. mmekọrịta itunes na android Ugwo 3.2 / 5 Android 1.6 na elu
3. iTunes ka Android mmekọrịta-Windows Free 4.0 / 5 Android 2.2 na elu
4. iSyncr maka iTunes ka Android Ugwo 4.5 / 5 Android 2.1 na elu
AirSync: iTunes mmekọrịta & airplay ka ọ dị mfe ka mmekọrịta iTunes n'etiti gị Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba na PC ma ọ bụ Mac-ejighi eriri. Dị ka maka ọdịnaya, ị nwere ike mmekọrịta music, listi ọkpụkpọ, na DRM-free videos na play adabere, Fim, na ndị ọzọ Ama. N'ihi na ihe Ama, ị nwere ike pịa njikọ n'okpuru. Download AirSync: iTunes mmekọrịta & airplay si Google Play >>
2. mmekọrịta itunes na android
mmekọrịta itunes na android bụ obere Android ngwa. Na ya, ị na-ike mfe mmekọrịta iTunes songs, MP3, playlist, videos na pọdkastị site Windows na kọmputa na-Android n'elu WiFi. Mgbe syncing, ị nwere ike na-eche na-enwe iTunes media na gị Android ekwentị ma ọ bụ na tebụl. Download mmekọrịta itunes na android si Google Play >>
3. iTunes ka Android mmekọrịta-Windows
Dị ka aha ya na-atụ aro, a na ngwa na-eji ka mmekọrịta iTunes media on Windows na kọmputa na Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba. Ya-enye gị ka mmekọrịta music, pọdkastị na vidiyo si na iTunes n'ọbá akwụkwọ gị Android ngwaọrụ. Ndị ọzọ data, gụnyere music egwu, album nkà, ga-synced kwa. Mgbe ahụ, mgbe syncing, ị nwere ike ịhazi ndị a media faịlụ site artists ma ọ bụ albums. Download iTunes ka Android mmekọrịta-Windows si Google Play >>
4. iSyncr maka iTunes ka Android
A na ngwa-enye gị ohere ka mmekọrịta iTunes na Windows ma ọ bụ Mac OS 10.5 na mgbe e mesịrị na Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba. Ọ na-eme ka ọ dị mfe mmekọrịta iTunes music n'elu WiFi ma ọ bụ site na iji eriri USB. Ọ bụghị nanị na mmekọrịta music, ma na-ekerekwa adabere, mmekọrịta Fim, kwuo na-adabere, ikpeazụ egwuri ụbọchị, na ikpeazụ ọsọsọp ụbọchị site iTunes gị Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba na-gị smart listi ọkpụkpọ ruo ụbọchị. Download iSyncr maka iTunes ka Android si Google Play Echekwala >>
Wondershare TunesGo - Download, Nyefee ma jikwaa iyi video na iyi mp3
Ọzọ Isiokwu Banyere Nyefee Music ka Android Devices
Best Android File Nyefee Alternative maka Ị
A Full Guide ka mmekọrịta Android na Mac
Nyefee Music si iTunes ka Nexus 5/4/7
Mmekọrịta iTunes na Android effortlessly
Top 5 Android Battery Manager: Enwe na Ọzọ Battery Ike na ekwentị gị
Top Fixes maka iPhone Agaghị mmekọrịta na iTunes
Họrọ gị achọsi Ike Ụzọ Tọgharia iPhone: Na iTunes ma ọ bụ iCloud
Olee Otú Ị Pụrụ Download iTunes Radio na-Android
Olee otú Kpido Multiple Songs na iTunes
> Resource> iTunes> A Full Guide nyefee Movies, Music na Ọzọ si iTunes ka Android